विद्यार्थी संगठन ऐंजेरू भए, उखेलौँ
विद्यानाथ कोइराला काठमाडौं, २३ माघ
‘शिलापत्र बहस’ मासिक स्तम्भ हो । यस स्तम्भमार्फत हामीले समाज, राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति तथा शैक्षिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बहस गर्दै आइरहेका छौँ । बहसको विषयमा पक्ष र विपक्षमा मत व्यक्त गर्न टिप्पणीकर्ताहरू स्वतन्त्र छन् । यो स्तम्भमा विज्ञ र विचारकबाट व्यक्त धारणाले देश र समाज निर्माणमा योगदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसपटक स्ववियूको औचित्यका विषयमा बहस केन्द्रित छ । यो विषयमा प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको मूल लेख ‘स्ववियूको औचित्य छैन, खारेज गरौँ’ (१५ माघमा प्रकाशित) विचारमाथि केन्द्रित रहेर प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको विचारलाई प्रस्तुत गरेका छौँ ।
हामीसँग स्ववियू होइन दबियु छ । दबियु भनेको दलहरूको विद्यार्थी युनियन हो । दलहरूको विद्यार्थी युनियन भइसकेपछि दलहरूको कुरा हुनु अन्यथा होइन । दलहरूले जे भन्छन्, त्यहीत्यही मान्ने युनियन कसरी स्ववियू हुन्छ ? विद्यार्थी संगठनलाई साँच्चै ‘पार्लियामेन्टेरियन सिस्टम’को अभ्यास गराउने हो भने स्ववियूलाई स्ववियूकै रूपमा रहन दिनुपर्‍यो ।
पार्टीले निर्देशन दिएर वा पार्टीको तर्फबाट यो हाम्रो मान्छे भन्ने परिस्थितिको अन्त्य गरौँ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात गरौँ । विद्यार्थीहरूको बीचमा संवादको सुरुवात गराउन सकिन्छ । राजनीतिक रूपमै पनि स्वस्थ छलफल चलाउन सकिन्छ । समाजवाद भनेको के हो ? समाजवादउन्मुख व्यवस्था कसरी हुन्छ ? वा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अझ कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस चलाऊन् ।
विद्यार्थीका जम्मा तीनवटा काम हुन्छन् । पहिलो काम पढ्ने नै हो । दोस्रो काम भनेको अनुसन्धान हो । तेस्रो काम भनेको सामाजिक क्षेत्रमा योगदान हो । र यी तीनवटै काममा विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । दलहरूले अब विद्यार्थी संगठनलाई घाँडोका रूपमा बुझेका छन् ।
शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीका संगठन अब दलहरूका लागि घाँडो नै भइसकेका छन् । मैले किन यसो भनेको भने, दलहरूका अब फूल टाइम कार्यकर्ता तयार भएका छन् । विद्यार्थी संगठन ऐंजेरू नै भइसके । किनभने दलहरूलाई विद्यार्थी संगठन नचाहिने नै भइसकेको छ ।
प्राडा मनप्रसाद वाग्ले भन्छन् : स्ववियूको औचित्य छैन, खारेज गरौँ
दलहरूलाई अब सडकमा ढुंगा हनाउनु छैन । विरोध प्रदर्शन गराउनु छैन । यसैले विद्यार्थी संगठन ऐंजेरू भए भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । अब विद्यार्थीलाई अध्यन, अनुसन्धानका लागि कसरी परिचालन गर्ने भन्नेतर्फ सोचौँ । विद्यार्थीलाई अब्बल खालको शिक्षा कसरी दिने ? हाम्रो र अन्रतािष्ट्रय शिक्षण पद्धतिबीचको तालमेल कहाँनेर हो ? यसमा विद्यार्थी, शिक्षक र विश्वविद्यालयको सहकार्य हुन सक्छ । अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्तिले गरी खाएनन् भन्यौँ । अब हामीले गरी खाने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो । विद्यार्थी संगठनलाई अब यतातिर जोड्ने हो । यस्तो भयो भने दलप्रतिको परनिर्भरता पनि विद्यार्थीको घट्दै जान्छ । नेतृत्व विकास पनि यहीँबाटै हुन्छ ।
विश्वविद्यालय भयमुक्त हुनुपर्छ
यसमा मेरो आफ्नै अनुभव छ । डाक्टर त्रैलोक्यनाथ उप्रेती बित्नुभयो । उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले आप्mनो मलामी पनि कोही नआउनू भन्दै बित्नुभयो । मलामी आउँदा पढाइ डिस्टर्ब हुन्छ, त्यसैले मलाई सम्मान गर्ने हो भने कुनै दिन पनि पढाइ नरोक्नु भन्नुहुन्थ्यो । त्यो दिन मैले पढाइरहेको थिएँ । एक जना विद्यार्थी आएर ‘सर पढाइ रोक्नुपर्‍यो’ भन्दै हप्कीदप्की गर्न थाले । मैले पढाउँछु भन्दाभन्दै पनि विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठाबाट निकाले । दलीय हिसाबबाट विवेकहीन काम गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको के काम ?
विद्यार्थी सुधार्ने सही समय
यो ठीक समयमा हामी आइपुगेका छौँ । विद्यार्थीले अब राजनीतिको झण्डा बोक्नुपर्ने स्थिति छैन । विद्यार्थीलाई क्रिटिकल बनाउने बेला नै यही हो । लोकतान्त्रिक दलहरूले गरेको काम कहाँनिर राम्रो हो ? वाम सरकारको राम्रो र नराम्रो काम कहाँनिर हो भनेर क्रिटिकल्ली बहस गराउने वातावरण बनाउने हो । विद्यार्थीलाई सकारात्मक छलफलतिर लैजाने बेला यही हो ।
वातावरण कसरी बनाउने ?
वातावरण त बनाउन सकिन्छ । म त अलिक सकारात्मक ढंगले पनि हेर्छु । विद्यार्थीको उमेर कति भन्ने कुरामा म त्यति धेरै चिन्ता लिन्नँ । व्यक्तिगत रूपमा १ सय वर्षको व्यक्तिले पनि पढ्न चाहन्छ भने विश्वविद्यालय जान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
त्यो पढ्न गएको हो भने किन टाउको दुखाउनुपर्‍यो । यहाँ त पटके विद्यार्थी धेरै भए । नेतृत्वले पनि के बुझेको छ भने पेशागत संगठनलाई विस्तारै अब राजनीतिक मुद्दाबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने गरेको सुनेको छु । हिजो ढुंगा हान्न लगाएकै हो तर अब तपाईंहरू कक्षाकोठामा जानुपर्छ भन्ने बुद्धि दलका नेताहरूमा पनि आएको छ । पार्टीका माउहरू र तिनका भ्रातृ संगठनहरू बसेर छलफल गरून् ।
समाजको वैकल्पिक चेत निर्माणका लागि हामीले कसरी काम गर्ने हो, हामीले भोलिको नेतृत्व कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेबारे उनीहरूले माउ पार्टीसँगै जवाफ माग्नुपर्छ । सीप कसरी सिकाउने, विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञानतर्फ कसरी जोड्ने भनेर छलफल गर्ने थुप्रै विषयहरू छन् त ।
अझै पनि लडाइँ गर्ने, विरोध गर्ने, टायर बाल्ने विद्यार्थी चाहिएन । विद्यार्थीहरू आफैँ खोज अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधारका लागि काम गर्न खोजिरहेका छन् । माउ पार्टीले विद्यार्थीको सृजनशिलतालाई मार्ने गरी परिचालन गर्नु हुँदैन । हिजोको जस्तो दलीय पूर्वाग्रहमा लड्ने होइन । कांग्रेसनिकटले कम्युनिस्टलाई, कम्युनिस्टनिकटले कांग्रेसलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब पनि विश्वविद्यालय नबनाउने हो भने कहिल्यै बन्दैन ।
अहिले भएको विरोधाभाषलाई पनि चिर्न आवश्यक छ । अहिलेको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने भनेको छ । यो नितान्त झुट कुरा हो । किनभने वाम सरकारले निजी विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई एकदमै माया गर्याे ।
निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, धार्मिक विद्यालयमा पढको विद्यार्थी शैक्षिक स्थिति बराबर हुने उहाँहरूले ठाउँ नै राख्नु भएन । यही ढंगले निजी विश्वविद्यालय, विद्यालय चल्न दिने हो भने अबको १० वर्षपछि सरकारी शिक्षालय सिला खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो स्थितिमा विद्यार्थी कहाँनिर बोले ? विद्यार्थीलाई गरी खाने सीप सिकाउन कसले चासो देखायो ?
विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिकाइ कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बहस गरौँ । भौतिक साधन, आधुनिक सिकाइको अभ्यास, सूचना प्रविधिको प्रयोग आदिबारे विद्यार्थीले विश्वविद्यालयसँग चासो राख्नुपर्‍यो । स्ववियूको बजेटमा आशक्ति देखाउनु भएन । निर्वाचन नै चाहिने हो, शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुने संगठन बनाउने हो भने स्ववियूको बजेट कसरी विनियोजन गर्ने, निर्वाचन कसले गराउने, पैसाको परिचालन कसरी हुने भन्नेबारेमा विद्यार्थीले धेरै चासो राख्न आवश्यक छैन ।
समृद्धिको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ । समृद्धि भनेको सीपबाट आउने हो । सीप बेच्न पाउने वातावरण निर्र्माण गर्न विद्यार्थी र विश्वविद्यालय लाग्न आवश्यक छ । सपना देख्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादनमा विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन लाग्नुपर्‍यो । अहिले श्रमसँग जोडिने विद्यार्थी आवश्यक परेको हो ।
(शिलापत्रडटकमले आयोजना गरेको ‘स्ववियू र यसको औचित्य’ शीर्षकमा आयोजित छलफलमा व्यक्त विचार)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २३, २०७६, १५:२३:००
स्ववियूको औचित्य छैन, खारेज गरौं
‘थिंकट्यांक’लाई स्वायत्तता दिइनुपर्छ